စက်ခေါင်းမော်ကွန်း - ထို rayhab
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan, TULOMSAS စက်ရုံမှာတွေ့ရတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေသငျ့လျြော။ အဆိုပါကန်ထရိုက်တာမှ General Manager Hayri Avci အင်ဂျင်နှင့် 1961 အတွက် TULOMSAS ပြတိုက်၏စာမေးပွဲပြီးနောက်သင့်လျော်သောထိုဒေသတွင် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ၏အမျိုးသားရေးထုတ်လုပ်မှု၏ခေါငျး, [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Yunusemre Manisa မြူနီစီပယ်အတွက်ရေနွေးငွေ့ခေါငျး Balikesir မှပြန်လာသောပါလိမ့်မည်ငှားရမ်းထားသော။ အဆိုပါ protocol ကိုအတူ2557 တထောင်ပေါင်နှင့်အတူ TCDD KDV လဲလှယ်အတွက် Yunusemre ၏မြူနီစီပယ်ပေါင်းတစ်တစ်နှစ်ငှားရမ်းတို့အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းနှင့် Manisa ခေါ်ဆောင်သွား [ပို ... ]
Ahmet ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ "ဟုစည်ပင်သာယာငွေချေးရှိပါတယ်။ စည်ပင်သာယာတစ်နှစ်ကဤစက်ခေါင်းငှားရမ်း TCDD နှင့်2557 တထောင်ပေါင်ပေါင်း VAT ကိုအတူ protocol ကိုလက်မှတ်ထိုး။ ဆင်ခြင်တုံတရားယုတ္တိဗေဒသို့ fit ပါဘူး! အဘယ်ကြောင့်ငှားရမ်း? အဆိုပါ 20 ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရုံမြေယာရထား [ပို ... ]
Balıkesirဘူတာ Manisa ထံသို့စေလွှတ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ပြသအင်တုံဘုံဘိုင်အတွက်လွမ်းဆွတ်ရထားလမ်းမြေယာအဖြစ်ပြ။ Balikesir xnumx'l တစ်နှစ်အမှုဆောင်များနှင့် '' Black ကရထား 'ဆိုတဲ့ဘူတာ Balikesir ဝှမ်းမှာ display ကိုအပေါ်နည်းပညာနဲ့သူ့ရဲ့ရန်ပွဲဆုံးရှုံးပြီးနောက်အကြောင်းကို 1960 နှစ်ပေါင်း [ပို ... ]
အဘယ်သူသည်တစ်ဦးက Millionaire လေို? သူ yadda ဂုဏ်ယူစွာအဆိုပါပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားရေးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်တူရကီ railwaymen သတိပေး, မေးခွန်းများကိုမေး၏။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေနွေးငွေ့ခေါငျးထဲမှာရွှေစာလုံး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားလမ်းသမိုင်း၏ဇာတ်လမ်း, အဆိုပါ 1957 Adnan Menderes တူရကီအတွက် [ပို ... ]
DE 10000 Eurasia ရထားထဲမှာ 2019 အမျိုးသားလျှပ်စစ် Shunting စက်ခေါင်းပြခဲ့ကြ
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ, တူရကီရဲ့သာနဲ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး3။ ရထားလမ်းနှင့်အလင်းရထားလမ်းဝိုင်း Eurasia ရထား 2019 '' ကိုလည်းရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများအဘို့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးပလက်ဖောင်းအဖြစ်ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်ထင်ရှားတဲ့ကုန်သွယ်မှုဝိုင်းဆွေးနွေး [ပို ... ]
ပထမဦးဆုံးကလမ်းပြမြေပုံနှင့်အညီအတွက်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းစနစ်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းပြောင်းနှင့် 1,5 အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း Tulomsas ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းခြင်း၏ရုံးအတွင်းထွက်သယ်ဆောင်လေ့လာမှုများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ရလာဒ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခံရဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားပြန်လည် [ပို ... ]
နှစ်ပေါင်းစောင့်ဆိုင်း Burdur ခရီးသည်တင်ရထားမီးရထားဘူတာမှာ display ကိုအပေါ်တစ်ဦးရေနွေးငွေ့ခေါငျးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းမွို့၌မီးရထားဘူတာရုံပြောင်းရွှေ့ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ရှိရာကနေအများပြည်သူကြေညာချက်နှင့်အတူရထားလမ်းရေနွေးငွေ့ရထားခေါငျးဖျက်သိမ်းရေး '' မြေယာရထား "၏အစီအစဉ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှု [ပို ... ]
TCDD, လောင်စာအတွက်လွဲသွားသို့ဆက်လက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တူရကီရဲ့ Sincan ခရိုင်အတွင်းရှိရထား loaded နှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Izmit-တူရကီအကြားသမားရိုးကျမီးရထားလမ်းအတွက်အလုပ်မှာတူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနေကြေညာချက်, "ဒီနေ့ (14.03.2019) တွင် [ပို ... ]
တူရကီတွင်တပ်ဆင်ဆီလွဲသွားရထားကတ်ကြေး Drop ပွင့်လင်းစိုက်ထားသောခဲ့သည်
ရထားများ၏လောင်စာရေနံတင်သင်္ဘောတင်ဆောင်လှည်းတင်ဆောင်တူရကီရဲ့ Sincan ခရိုင်ရေတံခွန်မှာလွဲချော်ရပ်တန့်။ BTS တူရကီဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌ Ozdemir "မီးရထားလွဲချော်ရပ်တန့်ထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်, လောင်စာဆီအချက်ပြနေစဉ်အတွင်းလက်ဝဲတစ်ဝက်အချက်များဖြစ်သောကြောင့်" တူရကီရဲ့ Sincan ခရိုင်အတွင်းရှိ Caglayan ကပြောပါတယ် [ပို ... ]
လောင်စာဆီတင်ဆောင်သည့်လွဲသွားရထားထဲမှာတူရကီရဲ့ Sincan ခရိုင်။ အဘယ်သူမျှမသေဆုံးသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရ2နာရီရထားဖျော်ဖြေမရနိုင်ခြင်းပင်အကြောင်းကို, ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်ရှိစဉ်အခါ။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, ဒါဟာတူရကီ Sincan ဘူတာရထားဘူတာနှင့်အတူ 01.30 နာရီအကြားအဆင့် [ပို ... ]
အဆိုပါသမိုင်းဝင်ပထမဦးစွာအမျိုးသားမီးရထားစက်ခေါင်း Bozkurt နှင့်တူရကီ Karakurt
အဆိုပါသမိုင်းဝင်ပထမဦးစွာအမျိုးသားမီးရထားစက်ခေါင်း Bozkurt နှင့်တူရကီ Karakurt ။ Booth နှင့် Karakurt လက်ရှိအငြိမ်းစားလုပ်တဲ့စက်ခေါင်းသို့ခွဲခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးပြည်တွင်းဖြစ်ပါသည်, သူတို့ဧည့်သည်ကိုမျှော်လင့်နေကြသည် .... Eskişehirအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ဦးဒဏ္ဍာရီများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်လိုလျှင်, ဖြစ်ကောင်းအစအဦး၌, "Eskişehirကိုခေါ် [ပို ... ]
အဆိုပါခေါငျး Malatya အတွက်လွဲချော်ရပ်တန့်
လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းအနီး TCDD Malatya ဘူတာရုံလွဲချော်ရပ်တန့်။ အဖြစ်အပျက်မထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနေစဉ်, မီးရထားစက်ခေါင်းများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များသည်Yeşiltepeစက်ခေါင်းကို Maintenance အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, လွဲချော်ရပ်တန့်တခုအတိအကျမသိရသေးအကြောင်းပြချက်န်းကျင်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းတော့ဘဲအရ [ပို ... ]
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသ ASELSAN နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်အဆိုပါEskişehir TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏မာနကိုနှင့်အတူကန်ထရိုက်တာများနှင့်ကမ္ဘာ့ဖွဲ့စည်းအကြီးဆုံးရထားလမ်းပြပွဲနှင့်ınnotrans၌ကြီးသောအတိုးကနေဘာလင်၏ဂျာမဏီရဲ့မြို့တော် '' [ပို ... ]
ဝန်ကြီး Turan ရထားစနစ်ဟာ 2019 တစ်နှစ်တာပစ်မှတ်ထဲမှာရှင်းလင်းချက်
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးအမ် Cahit Turhan, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအေဂျင်စီ (ICTA) ဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ် "2018 နှစ်ပေါင်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ပန်းတိုင် 2019 တစ်နှစ်" ဘာစာနယ်ဇင်း ပတ်သက်. အစည်းအဝေးတွင်မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ရထားလမ်းလိုင်းများလက်ရှိနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများမြှင့်, ကျနော်တို့စွမ်းရည်တိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ " Turhan မြန်ဆန် [ပို ... ]
ခကျြခကျြ CZ Loko, Tovorn Promet Koper ကုန်တင်ဘူတာရုံ shunting လေးသစ်ကိုဒီဇယ်စက်ခေါင်းထောက်ပံ့ဖို့လုပ်စလိုဗေးနီးရထားလမ်းအော်ပရေတာ Slovenske ZELEZNIC ရဲ့ကုန်တင်လက်ပွင့်လင်းအများပြည်သူနူးညံ့အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ နု CZ တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောသာကုမ္ပဏီများမှ [ပို ... ]
ဒေသခံအကြောင်းအရာအတွက်အမျိုးသား Hybrid ကိုခေါငျးရာခိုင်နှုန်း xnumx'n မှဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် Enver İskurt၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın TÜLOMSAŞ Visited ။ အဆိုပါကန်ထရိုက်တာမှ General Manager Hayri Avci တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏ခရီးစဉ်အတွင်းယင်းဧရိယာကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ၏TÜLOMSAŞစက်ခေါင်း Wagon စီမံကိန်းİskurtဒုတိယဝန်ကြီးထုတ်လုပ် [ပို ... ]
အဆိုပါစက်ခေါင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများ "Converter ကိုခပ်" ဟုအဆိုပါအမျိုးသားဆောင်မှုများထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
အဆိုပါသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနကောင်စီနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ရထားလမ်းစနစ်များကဏ္ဍ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Eskisehir, တူရကီနှင့်တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကဒေသခံများနှင့်အမျိုးသားရေးမှတ်တိုင် '' ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ converter ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်၏မျိုးဆက်သစ်ဖန်တီးရန်။ အဆိုပါကန်ထရိုက်တာများနှင့် TUBITAK [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေး Kurt Veys, ဟိုက်ဘရစ်ခဲ့ကြောင်းဒီဇိုင်းတူရကီစက်မှုဒီဇိုင်းဆုပေးပွဲ၏မျိုးဆက်သစ်များ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးလုပ်တဲ့စက်ခေါင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ ခေါငျး shunting မျိုးဆက်သစ်ဟိုက်ဘရစ်, တူရကီစက်ခေါင်း၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ [ပို ... ]
ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသား Hybrid ကိုစက်ခေါင်းဒီဇိုင်းဆု
ပို့ဆောင်ရေး, တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ) နှင့် ASELSAN ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဟိုက်ဘရစ်စက်ခေါင်း, "ဒီဇိုင်းတူရကီစက်မှုဇုန်များ၏နယ်ပယ်အတွင်းကျင်းပ, တူရကီဒီဇိုင်းအပတ် (တူရကီဒီဇိုင်းအပတ်) ထိုတတိယအကြိမ်ယခုနှစ်ကပူးတွဲထုတ်လုပ် [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan, တူရကီလောင်စာဆီသုံးစွဲမှုလျှော့ချခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာမျိုးစပ် shunting ခေါငျးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်နိမ့်တဲ့ operating ကုန်ကျစရိတ်, ပြင်သစ်၌ဤနည်းပညာကိုရှိဂျပန်နှင့်တရုတ်အပြီးကြောင်းစတုတ္ထတိုင်းပြည်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ ဝန်ကြီး Turhan သည်, မိမိ [ပို ... ]
Karakurt, တူရကီ Tulomsas ၏ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ပထမဦးဆုံးတူရကီသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထားစက်ခေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 1958, Traction အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲEskişehirခုနှစ်, Eskişehirမီးရထားစက်ရုံအသစ်ကနှင့်ပိုကြီးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအတွက်နာမတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါကပြည်တွင်းထုတ်လုပ်စက်ခေါင်း၏ပထမပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် [ပို ... ]
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရိတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်တရားမျှတပထမဦးစွာအမျိုးသား Hybrid ကိုခေါငျး InnoTrans
ထုတ်လုပ်အမျိုးသားရေးနှင့်နောက်မျိုးဆက်အတွက် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကို, TULOMSAS နှင့် ASELSAN ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအားထုတ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသားရေးစပ်ဘာလင် InnoTrans (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားနည်းပညာ, စနစ်များနှင့် Tools များ) တွင် 18-21 စက်တင်ဘာလ 2018 နေ့စွဲမှာငါတို့လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းစီမံကိုင်တွယ် [ပို ... ]
ဘာလင်မြို့တွင်ကျင်းပယခုနှစ်တွင်, ဂျာမနီ InnoTrans 2018 တရားမျှတသောပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲများ၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်TÜLOMSAŞထုတ်လုပ် TCDD ပထမဦးဆုံးဟိုက်ဘရစ်ခေါငျး InnoTrans မှာပြသ။ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydınကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲများTÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞအထွေထွေ [ပို ... ]
GE ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်TÜLOMSAŞ, ပထမဦးစွာအမိန့်စက်ခေါင်းလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပင်လယ်ကွေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအတွက် operating တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသန့်စင်ကုမ္ပဏီ Tupras ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီငါးခုဒီဇယ်လျှပ်စစ်စက်ခေါင်းမှထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်ညွှန်ပြ GE ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ ပင်လယ်ကွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီပြည်နယ်၏အဓိကလိုင်း၏အသုံးပြုမှုများအတွက်လိုင်စင်မတိုင်မီတစ်နှစ် [ပို ... ]
စီးရီးကိုပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းxnumx.türkiyeမော်တော်ကားထုတ်လုပ်: မော်တော်ကား Vehbi Koc, တူရကီ၏ပစ်မှတ်တွေထဲက၌သူ၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်လူသိများ ANADOL ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကားများထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ 1 တစ်နှစ် Ford Motor Company အတွက်ပစ်မှတ်ရောက်ရှိဖို့တူရကီနှင့် Vehbi Koc များ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရ [ပို ... ]
အမျိုးသားစည်းစိမ်ဥစ္စာမဟုတ်, တဦးတည်းစာတမ်းများပုပ်, ကိုမီးရှို့ .. !
နှစ်ပေါင်းစားသောက်ဆိုင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောပွနျလညျထူထောငျနှင့်သမိုင်းဝင်ကားများဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်အထူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး, သူတို့ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ရှိရာဒေသများရှိပစ်ချ SEKA စက္ကူစက်ရုံမီးရှို့ကြ၏။2လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမီးလှည်းအစဉ်လောင်ရမည်ပုံရသည်။ အမျိုးသားဥစ္စာဓနပုပ်သည် [ပို ... ]
သမိုင်းဝင်စက်ခေါင်း, ရထားမဟုတ်သော TIR'la Antalya မှယူဆောင်ခဲ့သည်
ယခု Usak ကနေကားတွေကြောင့် TCDD အရံ, 20 စတင်ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် Kepez မြူနီစီပယ်။ ရာစု Antalya မှပထမဦးဆုံးရေနွေးငွေ့ခေါငျးဆောငျခဲ့၏။ Kepez မြို့တော်ဝန် Hakan tobacconist, ရထားရထားအပြီးမီးရထားယခုလည်းမဟုတ်တဲ့ Antalya ခေါငျးမိတ်ဆက်ပေးသည်။ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]
Antalya Kepez စက်ခေါင်းရေနွေးငွေ့လာ
ယခု Usak ကနေကားတွေကြောင့် TCDD အရံ, 20 စတင်ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် Kepez မြူနီစီပယ်။ ရာစု Antalya မှပထမဦးဆုံးရေနွေးငွေ့ခေါငျးတတ်၏။ Antalya ၏ Kepez မြူနီစီပယ်ရထားကားများအပြီးလုပ်တဲ့စက်ခေါင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်။ Antalya ဖျက်သိမ်းရန်ခွဲဝေအဆိုပါHaydarpaşaရထားဘူတာလှည်းအတွက်မကြာသေးမီလများအတွင်း TCDD [ပို ... ]